‘भाँडमा जाए सुसंस्कृत राजनीति’
हाम्राेखबर सोमबार, कात्तिक १८ २०७६
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधी र आलोचकप्रति गर्ने ब्यवहारबाट अपरिचित सायद नै होलान । उनीसँग जोरी खोज्नेलाई उनले कतिसम्म असहिष्णु व्यवहार गर्छन् भने त्यो हेर्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन । गत भदौमा दोस्रो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि पार्टी सचिवालयको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति उनले गरेको व्यवहारलाई हेरे पुग्छ । पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरि उनले सहपाठी नेपालसँग भनाभन गरेका थिए । यो एउटा सानो र सामान्य उदाहरण मात्र हो । लेख्दै जाने हो भने यसको लामै ठेली बन्छ ।
यो लेख कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा होइन । न त कुनै सासन ब्यवस्था र पद्दतीको नै । केवल हाम्रो राजनीतिक संस्कार, नेताका आचरण तथा सत्ता र शक्ति छाड्नु पर्ने अवस्थामा देखिने केही चित्रहरुको मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गर्यो । यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेर आफैंले निर्णय गराएको अनुमान गर्न गाहे हुदैन । किनभने नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनको प्रकृया समेत सुरु नहुँदै तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले गरेको प्रदेशप्रमुखको विपक्षमा उनी थिए । त्यतिबेलै उनले आफ्नो सरकार बन्नेबित्तिकै सबैलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपी उनले लामो समयसम्म प्रदेशप्रमुखलाई चलाएका थिएनन् । तर आइतबार एकाएक उनले सातैै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएरै छाडे ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई किन हटाए ? उनलाई बाहेक कसैलाई थाहा नहोला । तर यसका पछाडि भने मुलतः दुइटा सन्देश लुकेको देखिन्छ । पहिलो, सत्ताबाट बहिर्गमन र दोस्रो, राजनीतिक प्रतिशोध । झट्ट हेर्दा दुवै सन्देश सान्दर्भिक लाग्छन । तर गहिराइमा पुग्ने हो भने पहिलो सन्देश अर्थात सत्ता बहिर्गमनको विषय समय सापेक्ष हुन आउँछ । जति लुकाए पनि गंभीर अस्वस्थ्य प्रधानमन्त्रीलाई यतिबेला आराम गर्न चौतर्फी दबाव छ, पार्टी भित्र र बाहिरबाट । यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीको पद त्याग । पार्टी अध्यक्ष त अर्का पनि भएकाले सो पद त्याग्नुपर्ने देखिदैन, निस्कृय भएमात्र पुग्छ ।
दोस्रो सन्देश किन हलुको छ भने, राजनीतिक प्रतिशोध लिन ओली माहिर छन । लेखको सुरुमा नै उल्लेख गरिसकिएको छ, आफ्ना विरोधी र आलोचकमाथि उनको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने । रह्यो कुरा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारसँगको राजनीतिक प्रतिशोध । प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय योसँग जोडिएको हो भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिंदा पुग्छ । किनभने उनले पछिल्ला दिनहरुमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बसाएर संबैधानिक आयोगहरुमा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गरिसकेका छन । त्यसैले पनि दास्रो सन्देश पहिलो सन्देशभन्दा फितलो भएको हो । यद्यपी यसले राजनीति दलहरुका बीच द्धन्द्धको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश प्रमुखको पद कार्यकारी पनि होइन् । त्यसैले सरकारलाइ उनीहरुबाट खतरा हुने कुरै भएन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर अनुदार लोकतन्त्रीक संस्कारको बिजारोपण भने गरेकै हुन । तत्कालिन देउवा सरकारले यी नियुक्ती गर्दा कुनै दलसँग परामर्श वा सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा गरेको भएपनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटोलाई अंगाल्नु हुने थिएन् । त्यो सरकारको काम गलत नै भए पनि । त्यस्ता गलत काम गर्ने परिपाटीलाई सुधार्दै अघि बढ्नु पर्नेमा ओलीले त्यो बाटो रोजेनन् । बरु ‘जस्तालाई त्यस्तै’ भने झै मुढे बल देखाए । आफ्नै सहपाठीलाई समेत बाँकी नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पछिल्लो कदम कुनै नौलो होइन् । तर यस्तो अभ्यासले गलत संस्कारको शुरुवात हुन्छ र दलहरु बीचको सम्बन्धमा चिसोपना पनि बढाउँछ । अर्को तर्फ आफ्नै पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदारलाई पनि भविष्यमा अप्ठेरोमा पार्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने उनले यो कदम तत्कालको आवश्यकता भन्दा पनि जानी बुझि चालिएको कदम हो भन्न सकिन्छ ।
आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा राज्यकोषको २० करोडभन्दा बढी खर्चेका प्रधानमन्त्री ओली यस्तै निर्णयले गर्दा देशको नेता बन्न सकेनन् र त्यो संभावना पनि देखिदैन । तराइ आन्दोलनका समयमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका समयमा नागरिकबाट प्राप्त सहानुभूतिले हौसिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कद घटाउँदै लगेका छन । उनको पछिल्लो प्रदेशप्रमुख हटाउने निर्णयलाई पनि यसैको कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । कहिले काहीं पद र शक्तिबाट बहिगर्मन हुनुपर्दा उसले जताभावी निर्णय गर्ने परम्परा हामी कहाँ नभएको होइन् । कतै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो त पछ्याएका होइनन् ? प्रश्न आफैंमा अहम् छ ।